परिवारवाट खुट्टा भाँचेर दस दिनसम्म बन्धक बनाइएकी महिलाको उद्धार – YesKathmandu.com
परिवारवाट खुट्टा भाँचेर दस दिनसम्म बन्धक बनाइएकी महिलाको उद्धार
बिहीबार ०३, पुष २०७१
काठमाडौ–श्रीमान तथा परिवारका सदस्यले खुट्टा भाँचेर दस दिनसम्म घरमै बन्धक बनाइएकी मोरङ गोबिन्दपुर ७ की २१ वर्षीया पार्वती सहनीलाई माइतीले उद्धार गरेको छ।
उद्धार गरेर बुधबार उनलाई कोशी अञ्चल अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनको दायाँ खुट्टा भाँचिएको छ। सहनीलाई श्रीमान् विजय मुखियाले गत मंसिर १७ गते दाउराको चिरपटले हिर्काएर खुट्टा भाँचिदिएका थिए। त्यसपछि परिवारको समेम मिलोमतोमा उनलाई उपचारबिना घरमै बन्धक बनाएर राखिएको थियो।
अन्नपुर्णपोष्टका अनुसार भाँचिएको खुट्टाको शल्यक्रिया भएको छ। सहनीले भनिन,सासुसुरासमेत लागेर मलाई मरणासन्न हुने गरी पिट्दै खुट्टा भाँचिदिए। घरमै थुनेर राखे। पीडाले छट्पटाउँदा पनि अस्पताल लगेनन्। कुटपिटमा सासुससुरा पनि संलग्न रहेको उनले बताइन्। विजयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
मंसिर १७ गते भएको घटनाको जानकारी माइती पक्षले २६ गते मात्र थाहा पाएका थिए। त्यसको दुई दिनपछि अस्पताल भर्ना गरिएको आमा लगत्तै उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छिमेकीले जानकारी गराएपछि मात्र उनलाई उद्दार गरी २९ गते अस्पताल भर्ना गरेको बुबा रामप्रभू सहनीले बताए।
गृहमन्त्रीले प्रहरीका समस्या प्रहरीलाई नै सुनाए
बिधि मिचेर उपराष्ट्रपतिकी श्रीमतिलाई उपचार खर्च
युवाका मुद्धा सम्बोधन नभए देशको उन्नति हुँदैन
चुनावको मिति सार्ने र हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने भित्रभित्रै प्रचण्डको तयारी
बिद्यालय हाताभित्रै दलित बालिका बलात्कृत
आन्दोलनकारी र प्रहरीविच वीरगञ्जमा दोहोरो झडप
साहुको ऋण तिर्न नसकेर २८ बिस्थापित
महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्न सकिनन् देवयानी
यसकारण लगाए प्रचण्डले बाबुरामलाई देशद्रोहीको संगिन आरोप
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा आज रातिदेखि यातायात आवागमन बन्द हुने
सर्वोच्चमा भरतपुर मतगणना विवादबारे आज सुनुवाइ हुँदै
घटस्थापना संगै यस वर्षको बडादशैं सुरु
अब पोइ चाहिएन कोमल ओलीलाई,पशुपति शर्मालाई बनाइन राजनीतिक सल्लाहकार
आज आईजिपी विवाद बारे सर्वोच्चमा अन्तिम बहस हुने
रामदेवले देखाएको बाटोमा हिँड्दा के हुँदोरहेछ ? कहिले चेत्ने ?
इतिहास र सपना बोकेको गणेशमानको एउटा पुस्तक
गच्छदारलाई सरकारमा लिन प्रचण्डको ‘एस’, देउवाको ‘नो’
१० हजार सवारी साधनबाट ३० लाख राजस्व सङकलन